Odisha Tour Packages - Mafambiro Anofarira India- Tour Operator Bhubaneswar - 91-993.702.7574
India ndiyo nyika inongoparadzanisa nenzvimbo dzinoshamisa kuti dziwanike, asi pakati penzvimbo dzinoshamisa zvikuru kune Odisha mune kumabvazuva kumabvazuva pedyo neBay de Bengal. Kune vashandi vanogara, Odisha - inozivikanwa saOrissa kusvika 2011 - inopa mhando yezvinhu zvakashata zvemabasa anosanganisira safaris yemasango, mashambwe emakwikwi, uye mahedheni akanaka ezvakaitika kare, Odisha inofanira kunge iri mubhuku rako rekufamba mabhakiti, uye iwe unogona kutora zororo rako rinotevera neOudisha Tour Packages.
Odisha, iri kumaodzanyemba kweruwa rweWest Bengali, ine nhoroondo yakareba uye inonakidza pamwe chete nevapfumi uye vane maitiro ezuva ranhasi tsika. Iyo inotaurwa mumabhuku ezvakaitika anopfuura makore zviuru zviviri zvekare, zvinoreva kuti inzvimbo ine nguva yakareba uye inonakidza shure, asi nhasi ine nzvimbo inofadza uye inofadza iyo iri kukurumidza kukurumidza. Odisha Tour Packages inokubatsira kuti uongorore zvakanyanya nzvimbo dzisina kuwanikwa
Gore negore, Odisha Tourism inova yakakurumbira sezvo vashanyi vazhinji uye vakawanda vanosvika kuzodzika mukati mezvinhu zvinoshamisa zvenharaunda yacho, kubva kune dzimwe nyika dzinoshamisa dzima kumaguta akapamba.
Nhasi, pane zvakawanda zvitsva zvinoshamisa apo vashanyi vanogona kudzidza pamusoro pehupenyu hwaOdisha hunofadza. Zvimwe zvekukwegura kwekare zvikuru munharaunda iyi zvinosanganisira mafananidzo ematombo eGudahandi, ayo anofungidzirwa kuti anopfuura makore e20,000. Kufamba mukati memapako aya ndiko kufamba mumakwara emadzitateguru edu kure. Nzvimbo dzedu dzekushanyira maOndisha dzinovimbisa kuti une ruzivo rwehupenyu hwose.
Ichi ndechokuti nzvimbo yacho inoratidza humwe humwe hwekare kare hwevanhu, uye kuvashanyira sevashanyi kuna Odisha ndezvekutora zvemazana emakore emakore anovhara nzvimbo. Zvimwe zvinoshamisa zvemasayiti ezvakaitika kare zvinenge zvichangoitika munguva pfupi asi zvisingashamisi - zvakadai seConark Sun Temple, inozivikanwa pasi rese nekuda kwekuvakwa kwayo kunoshamisa. Inovakwa muna 13th Century, kunyange zvimwe zvikamu zvetemberi zvino zvave matongo, mazhinji emifananidzo yakaisvonaka uye yakaoma uye nzvimbo dzakachengetedzwa. Nehurukuro dzedu dzeOudisha Tour iwe uchazoziva kuti chii chiri chaicho chinoreva kunaka.
Iva wekutanga kuongorora "Odisha Tour Packages" kukanzura mhinduro